लाग्यो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको टुंगो! ओलीको रोजाइमा परे रमेश खरेल, सशस्त्रमा को? पूरा विबरण सहित – पुरा पढ्नुहोस्……
लाग्यो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको टुंगो! ओलीको रोजाइमा परे रमेश खरेल, सशस्त्रमा को? पूरा विबरण सहित
११ चैत – नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा सेलिब्रेटी प्रहरी अधिकृतका रुपमा परिचित डिआईजी रमेश खरेल बढुवा हुने भएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खरेललाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पने मनस्थिति बनाएका छन् । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि खरेलको नाममा सहमत भइसकेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने आफू प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका उम्मेदवारलाई महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव लैजाने बताइसकेका छन् ।
ओलीले निकटस्थहरुसँग खरेल भावी महानिरीक्षक हुने बताएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो । हालका महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले ३० वर्षे सेवाहदका कारण आगामी २८ चैतमा अनिर्वाय अवकाश पाउँदैछन् । खरेलसँगै डिआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, पुष्कर कार्की, धिरु बस्नेतलगायत डिआईजीहरु महानिरीक्षकको दौडमा थिए । काभ्रेका स्थायी बासिन्दा खरेल आगामी ११ महिनाका लागि प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन् । उता सशस्त्र प्रहरीमा भने एआईजी पुष्पराम केसी महानिरीक्षक बन्ने भएका छन् ।
केसीसँगै एआईजीहरु शैलेन्द्र खनाल र नारायणबाबु थापा महानिरीक्षकको दौडमा थिए । केसी नुवाकोटका स्थायी बासिन्दा हुन् । सशस्त्र प्रहरीभित्र इमान्दार अधिकृतका रुपमा चिनिने केसी एक व्यवसायी प्रहरी अधिकृत हुन् ।जूमनेपालबाट
Prevओलिको सपना सप्तकोसीमा सुरु ! १४ किमी दुरी १५ मिनेटमै (पुरा विवरण सहित हेर्नुहोस)
Nextओलिले अंग्रेजीमै यसरी थर्काए युरोपियन युनियन लाई (भिडियो सहित हेर्नुहोस् )
३ करोड नेपालीका हिरो रबि लामिछानेले गरे नयाँ खुलासा, भनिन्छ नी प्रतिक्षाको फल मिठो हुन्छ यो भिडियो सबैले हेर्नुहोस!
आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य, कति घट्यो हेर्नुहोस्…